တရုတ်အလူမီနီယမ်ဘောလုံးထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ | Lixin
အလူမီနီယံနှင့်အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များသည်သံမဏိပြီးလျှင်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးသတ္တုများဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်လေကြောင်း၊ အာကာသ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းနှင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများတွင်သုံးသည်။
စက်မှုသန့်စင်သောအလူမီနီယမ်သည်မြင့်မားသော plasticity၊ corrosion resistance၊ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနှင့်အပူစီးကူးမှုစသည့်လက္ခဏာများရှိသည်။ အလူမီနီယံ၏ပေါ့ပါးသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့်အလူမီနီယံဘောလုံးများကိုလုံခြုံရေးယန္တရားများနှင့်သက်ဆိုင်သောယာဉ်တည်ဆောက်မှုတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
အချင်း ၂ မီလီမီတာ-၂၀ မီလီမီတာ
အင်္ဂါရပ်များ ၁- ပေါ့ပါး။ လျှပ်စစ်နှင့်အပူစီးကူးမှုကောင်းသည်
၃- အလွယ်တကူစက်၊ တူးပြီးထိပုတ်ပါ
၀.၀၅ ~ ၀.၂၀
၄.၅ ~ ၅.၆
၀.၀၅ ~ ၀.၂
အလူမီနီယမ်ဘောလုံးများသည် corrosion ကောင်းကောင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်အားကောင်းပြီးမျက်နှာပြင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ 1xxx စီးရီးသတ္တုစပ်များကိုအပူပေးမထားပါ။ ဤဘောလုံးများကို passivated အခြေအနေများတွင်ပံ့ပိုးနိုင်သည်။ 5xxx စီးရီးသတ္တုစပ်များသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
1xxx series သတ္တုစပ်များသည်သူတို့၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော corrosion ခုခံမှုကိုပေးသည်။ သဘာဝရေအားလုံးနီးပါးတွင်ကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 5xxx စီးရီးသတ္တုစပ်များသည်ကလိုရိုက်များနှင့်အယ်လ်ကာလီဖြေရှင်းနည်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ လေထုအတွင်းခံနိုင်ရည်အားကောင်းပြီးရေချို၊ ပင်လယ်ရေ၊ အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်၊ aldehydes တို့ကိုဆန့်ကျင်သည်။ အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်အားလုံးသည်ကလိုရိုက်များရှိနေခြင်း၌အပေါက်ဖောက်ခြင်းခံရသည်။
အထူးဝက်ဝံများနှင့်အဆို့ရှင်များ၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသောအရာများ (ကြေမွနေသောဘောလုံးများ)၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း (လုံခြုံရေးကိရိယာများ)၊ လေကြောင်းနှင့်အာကာသလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ။
1. 45KGS ထက်နည်းပါကကျွန်ုပ်တို့အမြန်လမ်းဖြင့်ပို့ပါမည်။ (တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်၊ အဆင်ပြေသည်)
၂. ၄၅-၂၀၀ KGS ကြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လေကြောင်းဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ (အမြန်ဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သော်လည်းစျေးကြီးသည်)
3. 200 KGS ထက်ပိုသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်လယ်ပြင်သို့ပို့လိမ့်မည်။ (စျေးအသက်သာဆုံးနှင့်ပုံမှန်)
ယခင်: Cylindrical Roller Bearing များ၊
နောက်တစ်ခု: Brass ဘောလုံး
တောက်ပသော Aluminium Ball
ချောမွေ့သော Aluminium Ball
ကြေးနီဘောလုံးလေးများ, Pure Solid Copper Ball ဖြစ်သည်, Brass Ball Check Valve သည်, Brass ဘောလုံး, H62 ကြေးဝါဘောလုံး, H65 ကြေးဝါဘောလုံး,